Akwụkwọ ụjọ maka Halloween | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ egwu maka Halloween
Carmen Guillen | | Akwụkwọ, oké ụjọ
E nwere oriri na ọ isụ byụ nke ọtụtụ ndị hụrụ n'anya (ọtụtụ na-eji ejiji ma na-anụ ụtọ ya) ma ụfọdụ kpọrọ asị: Halloween. Esemokwu na esemokwu dị iche iche, gịnị kpatara na anyị agaghị enye gị mkpokọta akwụkwọ zuru oke maka ụbọchị ahụ? Lee anyị wetara gị 7 akwụkwọ egwu maka Halloween, ma ọ bụ maka ụbọchị ịchọrọ, nke ahụ bụ mkpebi gị.
Ọ bụrụ na ụdị egwu a masịrị gị, anyị na-agwa gị na ị ga-ahụ akwụkwọ ndị a n'anya.
1 Akụkọ ifo (Edgar Allan Poe)
2 "Site na Hel" (John Franklin Bardin)
3 "Kwe ka m bata" (John Ajvide Lindqvist)
4 "Dracula" (Bram Stoker)
5 "Ikpe nke Charles Dexter Ward" (HP Lovecraft)
6 "Onye na-enwu" (Stephen King)
7 "Akwụkwọ Ọbara" (Cliver Barker)
Akụkọ ifo (Edgar Allan Poe)
Enweghị ike ịhapụ kpochapụwo eze nke ụjọ… Anyị na-akwado mbipụta akpa uwe nke ụlọ obibi akwụkwọ Alianza bipụtara na Septemba 2010, nke nwere mpịakọta abụọ.
Mpịakọta mpịakọta abụọ a na-enye mkpokọta nke 67 Akụkọ nke Edgar Alan Poe (1809-1849) bipụtara na ndụ ya niile na nsụgharị mara mma nke Julio Cortazar. Mpịakọta nke mbụ na-achịkọta akụkọ ndị ụjọ na-achị, ọnụnọ nke ike karịrị nke mmadụ, nchegbu metaphysical na uto maka nyocha, ebe nke abụọ na-anakọta nyocha banyere oge gara aga na ọdịnihu, akụkọ ndị mara mma na-atụgharị uche na-agbakwunye na nkà ihe ọmụma nke Poe banyere odida obodo, usoro nke foto ojoo na akuko banyere ocha satirical. Will ga-ahụ ya n'anya!
"Site na Hel" (John Franklin Bardin)
Mgbe ogologo ọgwụgwọ gasịrị, a hapụrụ Ellen ma laghachi di ya na New York ya na di ya. Ọ nọrọ ụlọ ọgwụ afọ abụọ ma ọ hụbeghị keyboard kemgbe ụjọ na-atụ ya. Ugbu a ọ chọrọ ịmaliteghachi ọrụ egwu ya, na ihe mbụ ọ na-achọ mgbe ọ lọtara bụ ya harpsichord. Naanị ya emechiri ma igodo enweghị ebe ọ bụla ịchọta ...
"Kwe ka m bata" (John Chidinma Lindqvist)
Oskar, nwatakịrị nwoke na-enweghị ọmịiko na mwute nke bi na ala ịta ahịhịa nke Stockholm, nwere ihe omume ntụrụndụ mara mma: ọ na-enwe mmasị ịnakọta mkpirisi akụkọ banyere igbu ọchụ ime ihe ike. O nweghị ndị enyi ya na ụmụ klas ya na-akwa ya emo ma na-emekpọ ya ọnụ. Otu abalị, ọ hụrụ Eli, onye agbata obi ọhụrụ ya, nwa agbọghọ dị omimi nke anaghị ajụ oyi, ọ na-enye ísì dị iche ma na-esokarị nwoke na-ele mmehie anya. Oskar nwere mmasị na Eli na ha enweghị ike ịhapụ. N'otu oge ahụ, ọtụtụ mpụ na ihe ndị ọzọ na-eju anya na-eme ka ndị uwe ojii nọ n'ógbè ahụ na-enyo ọnụnọ nke onye na-egbu ọchụ. Ọ dịghị ihe dị anya site na eziokwu. Akụkọ egwu nke oge a banyere akụkọ pụrụ iche nke ga-atọ ndị na-akwado ụdị a ụtọ.
"Dracula" (Bram Stoker)
Un kpochapu nke oma.
Jonathan Harker na-aga Transylvania iji mechie ụlọ ahịa ya na Earl dị omimi bụ onye zụtara ọtụtụ ihe na London. Mgbe njem dị ime nke nwere ihe ịrịba ama jọgburu onwe ya, Harker na-eburu ya na Borgo Pass site na ngwongwo ọjọọ nke na-akpọrọ ya, nke anụ ọhịa wolf na-adọkpụrụ, gaa n'ụlọ mkpọmkpọ ebe. Nke a bụ mbido na-enye ụjọ nke akwụkwọ edemede magburu onwe ya nke gosipụtara otu n'ime akụkọ ifo kachasị ewu ewu na ike n'oge niile: Dracula. Ike nke agwa - nke sinima ahụ weghaara mgbasa mgbasa ozi - afọ karịrị afọ ejirila ogo, mmalite na ụkọ nke ọrụ Bram Stoker, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ onyinye ikpeazụ na nke kacha awụ akpata oyi n'ahụ akwụkwọ Anglo-Saxon Gothic. Mbipụta anyị ji okwu mmalite mara mma, nke siri ike ma na-enye ihe ọmụma nke onye edemede Rodrigo Fresán, meghee, mmalite zuru oke nke ime ụlọ nke anwụrụ na-adịghị anwụ anwụ.
"Ikpe nke Charles Dexter Ward" (HP Lovecraft)
Ọ na-agwa anyị na peculiar talent nke Lovecraft iji mepụta ikuku mmekpa ahụ site na aro ndị na-eji nwayọọ nwayọọ agbagha onye na-agụ akụkọ banyere Charles Dexter Ward na-adịghị mma, nwa okorobịa si Providence, edemede edemede nke Lovecraft n'onwe ya, onye owu na-atụgharị uche, onye na-etinye onwe ya ahụ na mkpụrụ obi na ọmụmụ nke oge gara aga, na ọ kachasị ndụ na "ọrụ ebube" nke Joseph Curwen, nna nna ochie ya site na narị afọ nke 1692, onye rutere na Providence na-agbapụ "ịchụ nta amoosu" a ma ama nke Salem na XNUMX. N'iji ederede na ebe nchekwa na-ekpughe eziokwu banyere nke ahụ ihe omimi, ihe nzuzo ya na "ihe omimi di iche iche", na "ihe omuma di egwu na nke ozo" nke o mere. Okwu nke Charles Dexter Ward bụ akụkọ na-akpali akpali ma na-adọrọ adọrọ nke na-eduga anyị na obi nke akụkọ ifo gbara ọchịchịrị nke Cthulhu.
Kedu ihe si na Danny Torrance? Chọpụta na njedebe nke olu a, nke gụnyere mmalite nke Dọkịta ụra, ịga n'ihu nke Na-enwu. Mgbapụta. Nke ahụ bụ okwu Danny hụrụ n ’enyo. Na, ọ bụ ezie na ọ maghị agụ, ọ ghọtara na ọ bụ ozi ụjọ. Ọ dị afọ ise, na n'oge ahụ, ụmụaka ole na ole maara na enyo na-agbanwe ihe oyiyi, ọbụnadị obere dị iche n'etiti eziokwu na echiche efu. Mana Danny nwere ihe akaebe na echiche ya banyere enyo enyo ga-emezu: REDRUM… Mgbu, igbu ọchụ. Nne ya nọ na-eche maka ịgba alụkwaghịm, nna ya, nke ihe ọjọọ jọrọ njọ, nke jọgburu onwe ya dịka ọnwụ na igbu onwe ya, kwesịrị ịnakwere ntụzịaka ahụ maka ilekọta ụlọ nkwari akụ ahụ okomoko, nwere ihe karịrị otu narị ọnụ ụlọ dịpụrụ iche site na snow, n'oge isii Ọnwa. Ruo mgbe ha ghapuru ha ga-anọ naanị ha. Naanị?
"Akwụkwọ Ọbara" (Cliver Barker)
ya Mpịakọta 4 na mkpokọta nke Clive Barker na-atụgharị anya na nrọ ndị kasị dị omimi ma dị njọ, na-eke ihe oyiyi nke na-awụ akpata oyi n'ahụ, na-akpali akpali ma na-atụ ụjọ.
Ihe ọbụla ị họọrọ, otu ihe doro m anya: ị ga-atụ ụjọ nke ukwuu!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Akwụkwọ egwu maka Halloween
Ndewo ndi mmadu. Echere m na ị họrọla ezigbo akwụkwọ egwu.N'izugbe, ọ masịghị m ụdị edemede ahụ. Ndị ọzọ na-amasị m.
Ana m eso gị mgbe niile ma na-agụ ihe ị biputere.
Ekele na ngọzi.
Ndewo Victoria. A na-emepụta nhọrọ a nke akwụkwọ egwu maka ndị na-agụ akwụkwọ ndị hụrụ n'anya bụ ndị na-asọpụrụ akwụkwọ dị ka ụbọchị Halloween hehe ... datebọchị na-eru nso na ọ na-egwuri ihe yiri nke ahụ 🙂
Ọ ga-amasị m ịkele gị maka okwu gị na okwu gị maka m… Obi dị m ezigbo ụtọ ịmara na ndị dị ka gị na-eso blog a ma nwee mmasị na nke a na-ebipụta ebe a. Ya mere, daalụ nke ukwuu !!
Gabriel Auz dijo
Ndewo ndi mmadu,
Ekwenyere m na abụọ nke ochie ndị bụ adịghị ike m: akụkọ Stoker's Dracula na Poe. Enwere m mmasị (ma nke ukwuu) ka m bata, ebe ọ bụ na ihe nkiri nke akwụkwọ a dabeere na ya dị ebube ma na-enye m nsogbu. Abụọ ndị m nwere ike ịgụ ga-abụ Stephen King na Lovecraft, bụ ndị m gụrụla ihe n'oge m bụ nwata.
Nhọrọ dị oke mma 🙂
Zaghachi Gabriel Aúz
Obi dị m ụtọ ịnụ na ị na-amasị Gabriel! 🙂 Ọ bụrụ n’ị na-agụ nke ọ bụla n’ime ha, ka anyị mara 🙂 Obi ụtọ na Tuesday!
Onodi "Bido akwukwo gi" na Portal Writer
Edezi na ide ihe ọmụmụ na Escuela Cursiva